Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya oo la kulmay dhiggiisa Turkiga “SAWIRRO” – Radio Muqdisho
Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Soomaaliya Maxamed Cumar Carte Qaalib oo arrimo caafimaad u joogay dalka Turkiga ayaa ka baxay Isbitaalkii uu ku jiray, kadib markii 20-kii bishii Febraayo uu ku dhaawacmay Weerar naftii Halignimo ah oo Masjid ku dhex yaalla Hotelka Central ee magaalada Muqdisho.
Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Xukuumadda Fedaraalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte ayaa kulan kula qaatay magaalada Ankara Ra’iisul Wasaare kuxigeenka Turkiga Numan Kurtulus, iyagoo ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xiriirka Soomaaliya iyo Turkiga.
Kulanka ayaa waxaa goob joog ka ahaa Safiirka Soomaaliya u fadhiya Turkiga Amb. Maxamed Mursal Sheekh C/raxmaan iyo Xoghayaha Safaarada C/qaadir Maxamed Nuur iyo mas’uuliyiin kale.
Maxamed Cumar Carte, Wasiiro, Xildhibaano, Siyaasiyiin iyo dadweyne kale ayaa ku dukanayay salaadii jimcaha masaajid ku yaalla Hotelka gudihiisa, markii ay qaraxyada ka dhacayeen gudaha Hotelka, waxaana weerarkaas ku dhintay in ka badan 30-ruux oo isugu jiray Xildhibaano, Mas’uuliyiin, siyaasiyiin iyo dad shacab ahaa.
Ra’iisul Wasaare kuxigeenka oo dhaawicii ka soo gaaray weerarkaas loogu qaaday dalka Turkiga ayaa tan iyo mudadaas ku jiray Isbitaalka, iyadoo xaaladiisa lala tacaalayay, waxaana dhowaan la filayaa inuu dib ugu soo laabto dalka.
Xaalada caafimaad ee Ra’iisul wasaare kuxigeenka ayaa ah mid aad u wanaagsan, isagoo ka soo kabtay dhaawac fudud oo ka soo gaaray weerarkii Hotelka Central.